Post oge: 03-10-2021
A na-ejikwa ihe na-ebugharị ntụ ọka ntụ ọka na-ebu ihe N'ime igwe ihe ntụ ọka, a na-ejikarị ndị na-ebugharị ntụ ọka maka ịbuga ihe. Ha na-ebughari igwe nke na-adabere na ntughari na-agbaghari iji mee ka ihe di iche iche di iche iche ma obu ihe ndi ozo. TLSS usoro ...GỤKWUO »
Usoro FSFG na-etinye aka n'ọtụtụ ebe a na-egwe ọka ntụ ọka na osikapa na-egwe ọka. Dị iche iche sieving imewe na-eje ozi maka dị iche iche sifting amaokwu na dị iche iche midd ...GỤKWUO »
Na igwe ntụ ọka, a na-akpọ usoro nke iwepụ nkume na ọka wit de-nkume. Enwere ike wepu okwute na obere okike dị iche iche karịa ọka wit site na ụzọ nyocha dị mfe, ebe ụfọdụ nkume ndị hachara ka ọka wit chọrọ ịkọwapụta ...GỤKWUO »
Post oge: 03-09-2021
Thelọ ọrụ nri bụ ụlọ ọrụ ogidi nke akụ na ụba mba nke China, yana igwe nri bụ ụlọ ọrụ na-enye akụrụngwa maka ụlọ ọrụ nri. Site na mmelite nke ihe ndị mmadụ chọrọ maka ọdịbendị nri na ọganihu nke ụlọ nri, ụlọ nri, na othe ...GỤKWUO »